Plume Dhijitari Console Piano YY-DL02
Nerubatsiro rwe technoloy, panogona kuve nemusiyano mushoma pakati pedu nevatambi. Nezvido zvizere, piyano, mumhanzi uye nemanzwiro, zvinodzorwa nesu. Zviitiko zvakawandisa, zviyero uye mashandiro, yakashongedzwa uye ine simba, zvakanakira maElector akateedzana piyano yedhijitari. Ita mimhanzi uye kuridza piyano zvive chikamu chehupenyu hwedu.
Plume Dhijitari Console Piano YY-DJ08
Tichishandisa yepakati-renji PVC, isu takavaka zvakanaka Plume YY-DL02 Dhijitari Ratidza Piyano, yakasanganiswa kutakurika uye runako zvese mune imwe piano.
Iko kutsva kwekuwedzera 88 kiyi inobata keyboard kune dijitari console piano izano rakapenya kudaro. Yedu piano inokuunzira iyo yakasimba yekubata iyo ingaite sekuridza yakajairwa acoustic piano.
Ruzha ndirwo runenge rwese rwatinoitira hanya kana tichiridza piyano. Uye Plume YY-DL02 inokupa iwe ruzha rwusingareruke rwunobva kune inozivikanwa pasi piyano brand uchishandisa dhijitari yedu sosi sosi. Pakurekodha ruzha rwekutanga, isu taishandisa chete premium kurekodha chiridzwa kuti tione kuti hapana ruzivo rwakabairwa; kuedza kwese kungova nechinangwa chekukuunzira iwo ruzha rwakakwana.
Iyo 15 W yepakati-renji yekumisikidza stereo gudzazwi uye yepakati-renji mbiri chiteshi kukatendeka kwehwamanda mutauri inokwana zvakakwana kugadzira mhepo yakatenderedza inoita kuti uzvinyudze iwe munyika yemimhanzi.
Kunze kwezvo, iyo yekuratidzira kwedhijitari uye nehungwaru mashandiro senge auto kuperekedza uye auto chord zvakada kuita sekunge uine chaiye piyano tutor yekukutungamira uye kukutungamira iwe kubva kune anotanga nhanho kusvika munzira yekugona nhanho. Uye iwo maviri timbre uye metronome mabasa anotendera iwe kuti ugadzire yako wega mimhanzi musambo.
Pamusoro Materia Mid-renji PVC
Yekhibhodi 88 Kiyi Kubata Khibhodi
Inzwi Rinobva Dhijitari Inzwi Sosi
Stereo gudzazwi Mid-renji Kugadziridza 15W * 2
Mutauri Mid-renji Dual Channel Yakakwirira Kuvimbika Nyanga 80
Inowanikwa MIDI, Stereo Mahedhifoni, DC 12V Magetsi
Simba rekubuda 10W * 2
Ratidza Three Digit Ratidza
Akangwara Mabasa Auto Kuenderana, Auto Chord
Mamwe mabasa Dual Timbre, Rekodha / Kutamba, MP3 Player Rutsigiro, Metronome
Divi L1305 * W330 * H775mm
Pashure: Plume Dhijitari Console Piano YY-DJ08
Zvadaro: Plume Grand Piano G3
61 Kiyi Inorema Khibhodi
88 Kiyi Dhijitari Piano
88 Kiyi Khibhodi Inorema Kiyi
88 Kiyi Midi Khibhodi Inorema
88 Key Musical Keyboards
88 Key Piano Zvinyorwa
88 Keyboard Piano
88 Makiyi Anokwidza kumusoro Piano
88 Cherekedza Piano
88 Kurema Khibhodi
Alesis Konsati 88 Kiyi Dhijitari Piano
Alesis Recital 88 Kiyi Dhijitari Piano
Kutanga 88 Yekhibhodi
Bluetooth Piano Khibhodi
Yevana Yekhibhodi Piano
Costco Dhijitari Piano
Dhijitari Console Piano
Dhijitari Khibhodi Piano
Dhijitari Piano 88 Kurema Kiyi
Dhijitari Piano Kune Vanotanga
Dhijitari Piano Ongororo
Dhijitari Piano Mira
Dhijitari Piano Vs Khibhodi
Nyore Classical Piano
Nyore Jazz Piano
Electric Piano Kune Vanotanga
Electric Piano Yevana
Yemagetsi Khibhodi Ikiyi 88 ​​Keys
Magetsi Khibhodi Mimhanzi
Yakapetwa Piano Khibhodi
Kupeta Piano Khibhodi
Yakazara Piano Keys
Yakazara Saizi Piano
Yakanaka Kibhodhi Yevatanga
Yakanaka Piano YeVatangi
Grand Piano Kufamba
Yekhibhodi Piano 61 Makiyi
Yekhibhodi Piano 88 Mazano Akayerwa
Yekhibhodi Ine Mic
Vana Wooden Piano
Korg Dhijitari Piano
Mini Music Khibhodi
Mumhanzi Khibhodi Yevana
Mumhanzi Keyboard Keys
Musical Keyboard Yevana
Musical Keyboards Kune Vatangi
Piano Uye Keyboard
Piano YeVatangi Vana
Piano Kiyi Yakakura
Piano Keys YeVatangi
Pink Piano Khibhodi
Unyanzvi hwekhibhodi Piano
Tsvuku Yekhibhodi Piano
Roland Fp 10 Dhijitari Piano
Roland Frp 1 Dhijitari Piano Bhuru
Yechipiri Ruoko Dhijitari Piano
Semi Kurema Kiyi
Piano Diki Yevana
Yakajairwa Piano Keys
Iyo Grand Piano
Vintage Magetsi Piano
Yakayerwa Dhijitari Piano
Chena Magetsi Piyano
Akachena Makiyi PaPiano
Williams Legato 88 Kiyi Dhijitari Piano
Plume Dhijitari Console Piano YY-DJ04
Plume Dhijitari Console Piano YY-03
Magetsi Grand Piano, Smart Piano Khibhodi, Dhijitari Yakatwasuka Piano, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano, Magetsi Akarurama Piyano, Dhijitari Piano Kugadzirisa,